Yize ukuba nomthombo ozinzile wokuhola sekuvele kuyinto enhle kunoma yiliphi ibhizinisi, ngeke kulethe ukudla epuletini. Uzojabula kakhulu uma ukubuyiselwa kwakho kwezentengiselwano kuhambisana nombiko wakho omuhle we-Google Analytics. Kulokhu, okungenani ingxenye yalokhu kuhola kufanele iguqulelwe ekuthengiseni nakumakhasimende. Kuthiwani uma uthola amathani wokuhola, kepha akukho ukuthengisa? Yini ongayenzi kahle, futhi yini ongayenza ukuqondisa ukugcwaliswa kwethempeli lakho libuyele kuthrekhi yalo efanele?